Villa house / Guri villo ah oo ka kooban 5 qol - MyProperty.so
Villa house / Guri villo ah oo ka kooban 5 qol
Villa house / Guri villo ah oo ka kooban 5 qol For Sale
Jidka warshadda hargaha
Waxaan xaraashayaa guri villo ah baaxadda dhulka 18m x 11m. Wuxuu leeyahay jid baabuur gali karo. 5 qol oo waawayn, dariishado iyo albaabyo bir ah oo oo waawayn oo shabaq ku xidhan yahay. Musqul gudaha iyo musqul dibadda ah. Jiko gudaha ah, barando, barxad bannaanka ah, ceel biyo macaan ah iyo Ganjeel. Guriga wuxuu ku yaallaa jid caddaha u dhexeeya warshaddii hore ee hargaha iyo jid-caddaha waddada macallin Jaamac.
Address: Jidka warshadda hargaha
Zip/Postal Code: Warshadda hargaha
Updated on October 2, 2018 at 3:26 am
Property ID: 4907
Hello, I'm interested in [Villa house / Guri villo ah oo ka kooban 5 qol]
Kismayo, Jubbada Hoose, Somalia
Commercial stores in Alanley, Kismayo
Villa house / Guri villo ah oo ka kooban 5 qol - Jidka warshadda hargaha
Hello, I'm interested in[Villa house / Guri villo ah oo ka kooban 5 qol]